के अर्जुन घिमिरे पाँडेले सक्किगोनी छाडेका हुन? यस्तो छ कुरा?? सक्किगोनीमा नदेखिनुको कारण ! - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार के अर्जुन घिमिरे पाँडेले सक्किगोनी छाडेका हुन? यस्तो छ कुरा?? सक्किगोनीमा नदेखिनुको...
के अर्जुन घिमिरे पाँडेले सक्किगोनी छाडेका हुन? यस्तो छ कुरा?? सक्किगोनीमा नदेखिनुको कारण !
कतै तपाईंहरूको सक्किगोनि पनि भित्रभित्रै त फुटेको त हैन ? अर्जुन घिमिरे पाँडे नभएको सक्किगोनि पनि सक्किगोनिझैं भएको छ। हामीलाई पाँडे जसरी नि चाहियो।’‘पाँडे खोई चाइयो, नुनबिनाको तरकारीजस्तै भयो सक्किगोनि।’
अर्जुन लामो समयदेखि सक्किगोनि नदेखिनुको कारण भने पिडादायी छ। झन्डै तीन महिनादेखि आमा अस्वस्थ भएर अस्पताल भर्ना भएका कारण उनी पीडामा छन्। आमालाई मस्तिष्कघात भएर अस्पताल भर्ना गरिएदेखि सक्किगोनिका मुख्य कलाकारमध्येका एक अर्जुन घिमिरे त्यसमा देखिएका छैनन्।
अर्जुन हिजोआज ग्रिन सिटी अस्पतालमा अचेत अवस्थामा उपचाररत आमाको स्याहार—सुुसार र त्योभन्दा बढी चिन्तामा छन्। ‘मम्मीलाई ब्रेन ह्याम्ब्रेज भएको लामो समय भइसकेको छ, तर पनि उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आउने आशामा अस्पताल परिसरको च’क्कर का’टिरहेको छु।
सुधार भने आउन सकेको छैन’ अर्जुन दुःख पोख्छन्— ‘उहाँको स्थिति क्रिटिकल नै रहेकोले ममीको यस्तो अवस्थामा मलाई सिरियलको सुटिङमा जाने मुड नै भएन। आमालाई गाह्रो परिरहेका बेला दर्शक हँसाएर हास्य सिरियलमा खेल्ने हिम्मत ममा भएन।
त्यसकारण अहिले सिरियल छोडेर मम्मीकै हेरचार गरिरहेको छु।’ सक्किगोनिमा आफूलाई हेर्न प्रतीक्षारत दर्शकलाई अर्जुन आफ्नो अवस्था सहज भएपछि मात्र सिरियलमा फर्कनने बताउँछन्। ‘अहिले म हस्पिटलमै बसिरहेको छु। मलाई दाइहरूले पनि सहयोग गरिरहनुभएको छ।
अब मम्मीको स्वास्थ सामान्य अवस्थामा आएपछि र स्थिति सहज भएपछि फेरि सक्किगोनिमार्फत दर्शकमाझ आउनेछु’ उनी भन्छन्। अर्जुन सुनाउँछन् ‘डाक्टरहरू ममीको स्वास्थ्यको खटिइरहनुभएको छ। हामी उहाँको स्वा’स्थ्यलाभको कामना गरिरहेका छौँ।
आशा छ, ममीको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। उहाँलाई होस आइहाल्छ कि भन्ने झिनो आशाका साथ हामीले उहाँ अचेत भए पनि अस्पतालमै केक काटेर उहाँको बर्थडे पनि मनायौँ। उहाँको इच्छा पनि थियो जन्मदिनको दिन केक का’ट्ने। तर, अस्पतालको बेडमै केक का’टेको पनि उहाँले सायदै थाहा पाउनुभयो।’
Previous articleयी ११ जलविद्युत, ४ माइक्रोफाइनान्स र २ बीमा कम्पनी आइपिओ निष्कासनको पाइपलाइनमा
Next articleकहिलेसम्म पर्छ भदौरे झरी? आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान